ရုပျသံစီးရီးအညှနျး – Ragnarok (2020) – Gaming Noodle
ဇန်နဝါရီလကုနျမှာ Netflix Original Series အသဈတဈခုအဖွဈ ထှကျလာတဲ့ Ragnarok ကတော့ Norse Mythology ကို အခွခေံထားတဲ့ နျောဝရေုပျသံစီးရီးတဈခုပါ။ နျောဝဘောသာစကားပွောဖွဈပွီး ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ Netflix ပျေါသို့ စုစုပေါငျး Episode6ပိုငျးပါတဲ့ Season 1 တငျလာခဲ့ပါတယျ။
ကလေးနှဈယောကျမိခငျ Turid ဟာ သူ့ဇာတိမွေ Edda မွို့လေးကို အရှယျရောကျခါစ သားနှဈယောကျနဲ့အတူ ပွနျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီထဲက အငယျဖွဈသူ Magne ဟာ စာလုံးတှကေို သခြောမဖတျနိုငျတဲ့ Dyslexia ရောဂါသညျဖွဈပမေယျ့ Edda မွပေျေါကို ပွနျရောကျတာနဲ့ ထူးခွားတဲ့အဖွဈအပကျြတှေ ဆကျတိုကျဖွဈပကျြလာခဲ့ပါတယျ။
Edda မွို့လေးမှာ မွို့တျောဝနျထကျတောငျ လှမျးမိုးမှုရှိနသေူတှကေတော့ Jutul မိသားစုဖွဈပွီး တဈမွို့လုံးနီးပါး သူတို့ကြေးဇူးမကငျးသလို သူတို့ရဲ့ စကျရုံတှကေ Edda ကို အဆိပျသငျ့စတေယျလို့ လူငယျတှကေ ပွောနရေငျတောငျ အရေးယူမခံရတဲ့ သူမြိုးတှပေါ။ အစစအရာရာပွညျ့စုံလှနျးတဲ့ Jutul မိသားစုရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက ဘာလဲ? Magne ကွုံတှလေ့ာရတဲ့ အဖွဈဆနျးတှကေရော သူတို့နဲ့ ဘယျလိုပတျသကျနလေဲ။
Ragnarok ဆိုတာ Odin, Thor အစရှိတဲ့ Norse နတျဘုရားတှအေတှကျ ကမ်ဘာပကျြကပျဖွဈပွီး Ragnarok လာပွီး အားလုံးပကျြစီးပွီးတာနဲ့ အားလုံးကို အစကနပွေနျလညျတညျဆောကျရပါတယျ။ တနျခိုးကွီးမားလှတဲ့ နတျဘုရားတှတေောငျ မကြျောလှနျနိုငျတဲ့ ဒီကပျဆိုးဟာ Edda မွို့လေးနဲ့ ဘယျလိုပတျသကျနလေဲ ဆိုတာကို စိတျဝငျစားစရာ ခြိတျဆကျပွသှားတာ မဆိုးဘူးလို့ ပွောရမှာပါ။
ဒီစီးရီးရဲ့ အဓိကပှိုငျ့က ကမ်ဘာကွီးပျေါမှ စကျရုံတှထေုတျလုပျနတေဲ့ ဓါတုပစ်စညျးတှဟော သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို သတျဖွတျနကွေောငျး၊ လူသားတှကေိုလညျး ရရှေညျမှာ ဒုက်ခပေးလာမှာဖွဈတယျ ဆိုတာကို Norse နတျဘုရားတှနေဲ့ Giant တှရေဲ့ တိုကျပှဲကွားက Superhero ဆနျဆနျ ပွကှကျတှနေဲ့ ခြိတျဆကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ပဲလားမသိ၊ အရမျးစှဲလမျးလောကျစရာမရှိပမေယျ့ နိုငျငံခွား Critic တှကွေားမှာတော့ Rating တျောတျောကောငျးနတော တှရေ့မှာပါ။ ကြှနျတေျာ့အမွငျမှာတော့ ဇာတျလမျးခြိတျဆကျမှုနဲ့ အပွပိုငျးက ၂၀၂၀ ခုနှဈထဲမှာ သိပျထူးထူးခွားခွားမရှိဘူးလို့ အားနာနာနဲ့ ပွောရမှာပါ။
ရုပျသံစီးရီးပမေယျ့ Netflix Original စီးရီးဆိုတော့ ဘတျဂကျြတော့ အတျောလေးပွညျ့စုံပုံရပါတယျ။ အထူးပွုလုပျခကျြတှေ Visual ပိုငျးတှလေညျး အနောကျတိုငျးစူပါဟီးရိုးကားဆနျဆနျပဲ၊ ဇာတျကောငျနဲ့ ဇာတျကှကျပိုငျးက အထာမကကြအြောငျ ရိုကျထားပမေယျ့ လူတိုငျးတော့ ရာနှုနျးပွညျ့ ဘဝငျကမြယျ မထငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မကောငျးဘူးလို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး၊ ကွညျ့ပြျောပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး အရမျးမကွိုကျဘူးသာပွောတာ ခွောကျပိုငျးလုံး တဈထိုငျထဲ ကွညျ့လိုကျတာပါပဲ။ ဒါကလညျး Netflix စီးရီးတှရေဲ့ ဆှဲဆောငျခကျြတဈခုလို့ပဲ ပွောရမှာပေါ့။
သဘောအကဆြုံးကတော့ အစောက ပွောခဲ့သလို သဘာဝပတျဝနျးကငျြအန်တရာယျကို Myth နဲ့ခြိတျဆကျပွီး ဆှဲဆနျ့ရိုကျလာတာပါ။ အဓိကဇာတျကောငျ Magne ဟာ Percy Jackson နညျးနညျး၊ Neil Gaiman ရဲ့ Norse Mythology ထဲက ဇာတျကောငျပုံစံနညျးနညျး (ဘာဇာတျကောငျဆိုတာတော့ ကွညျ့နရေငျး သိလာမှာပါ) ပေါငျးစပျထားတယျလို့ ခံစားရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Magne နရောမှာ သရုပျဆောငျတဲ့ David Stakston ကတော့ တျောတျောလေးကောငျးတဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျပါ။ Jutul မိသားစုဝငျတှအေပွငျ အခွား Cast တှကေလညျး သူ့နရောနဲ့သူ အံဝငျခှငျကရြှိပါတယျ။
ဘာပဲပွောပွော Netflix က မတူညီတဲ့ နိုငျငံတှေ၊ ဘာသာစကားတှေ၊ ယဉျကြေးမှုတှကေို လိုကျပွီး စီးရီးတှေ ထုတျလုပျပေးတာ အရမျးသဘောကပြါတယျ (Death Note ကလှဲလို့ပေါ့)။ အခု Ragnarok ကလညျး မကွညျ့မဖွဈတော့ မဟုတျပမေယျ့ ကွညျ့မယျဆို ကွညျ့ပြျောတယျလို့ပဲ Recommend ပေးလိုကျပါရစေ။
Motaku’s Taste – 7/10
#Motaku #Ragnarok #Netflix #Review #kyitha
ဇန္နဝါရီလကုန်မှာ Netflix Original Series အသစ်တစ်ခုအဖြစ် ထွက်လာတဲ့ Ragnarok ကတော့ Norse Mythology ကို အခြေခံထားတဲ့ နော်ဝေရုပ်သံစီးရီးတစ်ခုပါ။ နော်ဝေဘာသာစကားပြောဖြစ်ပြီး ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့မှာ Netflix ပေါ်သို့ စုစုပေါင်း Episode6ပိုင်းပါတဲ့ Season 1 တင်လာခဲ့ပါတယ်။
ကလေးနှစ်ယောက်မိခင် Turid ဟာ သူ့ဇာတိမြေ Edda မြို့လေးကို အရွယ်ရောက်ခါစ သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲက အငယ်ဖြစ်သူ Magne ဟာ စာလုံးတွေကို သေချာမဖတ်နိုင်တဲ့ Dyslexia ရောဂါသည်ဖြစ်ပေမယ့် Edda မြေပေါ်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပျက်လာခဲ့ပါတယ်။
Edda မြို့လေးမှာ မြို့တော်ဝန်ထက်တောင် လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသူတွေကတော့ Jutul မိသားစုဖြစ်ပြီး တစ်မြို့လုံးနီးပါး သူတို့ကျေးဇူးမကင်းသလို သူတို့ရဲ့ စက်ရုံတွေက Edda ကို အဆိပ်သင့်စေတယ်လို့ လူငယ်တွေက ပြောနေရင်တောင် အရေးယူမခံရတဲ့ သူမျိုးတွေပါ။ အစစအရာရာပြည့်စုံလွန်းတဲ့ Jutul မိသားစုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာလဲ? Magne ကြုံတွေ့လာရတဲ့ အဖြစ်ဆန်းတွေကရော သူတို့နဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲ။
Ragnarok ဆိုတာ Odin, Thor အစရှိတဲ့ Norse နတ်ဘုရားတွေအတွက် ကမ္ဘာပျက်ကပ်ဖြစ်ပြီး Ragnarok လာပြီး အားလုံးပျက်စီးပြီးတာနဲ့ အားလုံးကို အစကနေပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါတယ်။ တန်ခိုးကြီးမားလှတဲ့ နတ်ဘုရားတွေတောင် မကျော်လွန်နိုင်တဲ့ ဒီကပ်ဆိုးဟာ Edda မြို့လေးနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားစရာ ချိတ်ဆက်ပြသွားတာ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။
ဒီစီးရီးရဲ့ အဓိကပွိုင့်က ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှ စက်ရုံတွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို သတ်ဖြတ်နေကြောင်း၊ လူသားတွေကိုလည်း ရေရှည်မှာ ဒုက္ခပေးလာမှာဖြစ်တယ် ဆိုတာကို Norse နတ်ဘုရားတွေနဲ့ Giant တွေရဲ့ တိုက်ပွဲကြားက Superhero ဆန်ဆန် ပြကွက်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ပဲလားမသိ၊ အရမ်းစွဲလမ်းလောက်စရာမရှိပေမယ့် နိုင်ငံခြား Critic တွေကြားမှာတော့ Rating တော်တော်ကောင်းနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ဇာတ်လမ်းချိတ်ဆက်မှုနဲ့ အပြပိုင်းက ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲမှာ သိပ်ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးလို့ အားနာနာနဲ့ ပြောရမှာပါ။
ရုပ်သံစီးရီးပေမယ့် Netflix Original စီးရီးဆိုတော့ ဘတ်ဂျက်တော့ အတော်လေးပြည့်စုံပုံရပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ Visual ပိုင်းတွေလည်း အနောက်တိုင်းစူပါဟီးရိုးကားဆန်ဆန်ပဲ၊ ဇာတ်ကောင်နဲ့ ဇာတ်ကွက်ပိုင်းက အထာမကျကျအောင် ရိုက်ထားပေမယ့် လူတိုင်းတော့ ရာနှုန်းပြည့် ဘဝင်ကျမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကြည့်ပျော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းမကြိုက်ဘူးသာပြောတာ ခြောက်ပိုင်းလုံး တစ်ထိုင်ထဲ ကြည့်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါကလည်း Netflix စီးရီးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။
သဘောအကျဆုံးကတော့ အစောက ပြောခဲ့သလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ကို Myth နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဆွဲဆန့်ရိုက်လာတာပါ။ အဓိကဇာတ်ကောင် Magne ဟာ Percy Jackson နည်းနည်း၊ Neil Gaiman ရဲ့ Norse Mythology ထဲက ဇာတ်ကောင်ပုံစံနည်းနည်း (ဘာဇာတ်ကောင်ဆိုတာတော့ ကြည့်နေရင်း သိလာမှာပါ) ပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Magne နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ David Stakston ကတော့ တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ Jutul မိသားစုဝင်တွေအပြင် အခြား Cast တွေကလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ အံဝင်ခွင်ကျရှိပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော Netflix က မတူညီတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ ဘာသာစကားတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လိုက်ပြီး စီးရီးတွေ ထုတ်လုပ်ပေးတာ အရမ်းသဘောကျပါတယ် (Death Note ကလွဲလို့ပေါ့)။ အခု Ragnarok ကလည်း မကြည့်မဖြစ်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ကြည့်မယ်ဆို ကြည့်ပျော်တယ်လို့ပဲ Recommend ပေးလိုက်ပါရစေ။